Site na: kltogona: March 22, 2020 00: 10 Enweghị asịsa
Na Europe, andtali na France na-akwụ ọnụ ahịa dị egwu site na ọtụtụ narị ọnwụ. Azọghị ndị ọzọ nke mba Europe na ụwa. Otu a ka ufodu mmadu siri mee ihe di omimi rue nchikota nke uzo ha.
Mana na Black Africa (Sub-Saharan), iyi egwu a apụtaghị na ewerechara ya. Nye ọtụtụ, Covidien-19 bu oria di ocha, nke enweghi ike itughari ma obu igbu ndi mmadu. Lee ụwa nke na-enweghị uche ọ bụ! Agbanyeghị, WHO agbaala Afrịka ume ịkwadebe maka ihe kachasị njọ.